Talooyin iyo tabaha ee AVCHD on iPad
Qeybta 1: Talaabooyinka sawirka kala iibsiga
Qeybta 2: Si loo soo dhoofsadaan AVCHD in iPad
Qeybta 3: Sida loo badalo videos in iPad fudud oo degdeg ah
IPad waa mid ka mid ah xubnihii software ugu fiican in la soo saaray by Apple Inc. si loo hubiyo in user helo ugu wanaagsan iyo waayo-aragnimo ugu cabsi badan oo horumar leh uu eegin. Waxaa sidoo kale in la xuso in ee Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waa dhab dhalashada ah in user helo ugu fiican iyo ku tiirsanaanta madal ugu inter
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay iyada oo xiriir ah http://www.macxdvd.com/mac-ipad-video-converter/ oo mar sameeyo waa in la bilaabay:
2. Sida waxaa la muujiyay sawir ah in geeddi-socodka uu ka kooban yahay 4 tallaabo ee guud ahaan taas oo lagu macnayn lahaa mid mid. In tallaabada ugu horreysa user u baahan yahay in lifaaq fiidiyo ah la Mac ah iyo in la hubiyo in button file dar la isku soo riixayo talaabadii ugu horeysay,
3. button iPad markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in goobaha ay la geliyaa, si loo hubiyo in ugu wanaagsan iyo fursadaha ugu horumarsan la muujiyey:
4. folder saarka ayaa markaa waa in la doortay sida iPad ah oo uu soo xiran nidaamka iyo sidoo:
5. button bilowga waa ka dibna in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan dhamaado iyo sawirada waxaa laga soo wareejiyay fiidiyo ah in iPad ee fudayd iyo qanacsanaanta,
Si aad u hubiso in sawiro laga soo qalab kale oo si toos ah loo wareejiyay iPad ka dhigi, sidoo kale waa in la ogaadaa in ugu fiican iyo technology ugu horumarsan ee arrintan la xiriira waa ay hubiyaan in barnaamijka uu soo doortay waa kuwa aan ka cabsi badan taageero macaamiisha oo ay hesho natiijooyinka ugu fiican in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira .. barnaamij waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hayaan oo u oggolaan doonaa user si aad u hesho adeegyada ku jira line shuruudaha user.
Sida loo soo dhoofsadaan AVCHD in iPad
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo siyaabaha ugu horumarsan oo uu soo kor lagu soo sheegay oo user hadda ka heli doontaa aqoonta dheeraad ah iyada oo qayb-hoosaadka in lagu macnayn lahaa sida hoos.
AVCHD Import ka fiidiyo ugu computer
Waxaa sidoo kale in la xuso in nidaamka kaas oo lagu reveled kor ku xusan waxa kale oo ku xidha arrinta sakhiray sida ay tahay mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in qaab AVCHD ah waxaa loo baddalaa ka dibna loo gudbiyay iPad ee ugu fiican iyo gobolka dib u eegista tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user raaci karo wadadii habka kor ku xusan si aad u samaysay baahan yahay waqti ka waynay oo dhan.
Beddelaan AVCHD in iPad socon video
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay oo loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah oo halkan aan helno in qayb ka mid ah tutorial inaga kaxeeyaa dhinaca xaqiiqda ah in sida aan u helaysaa natiijada ugu wanaagsan in this xiriira by diinta videos ee fudayd iyo qanacsanaanta. Diinta AVCHD in qaab iPad socon sidoo kale waxay u baahan tahay user a si ay u hubiyaan in iPad qaabab socon la muujiyey oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Waa maxay qaababka sameeya taageero iPad
Ka dib waa qaabab ee loo isticmaalo oo ay taageerto iPad iyo waxa aad u muhiim ah in la ogaado in qaabab kuwaas oo ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira:
H.264 video ilaa 720p @ 30 loox kasta labaad
MPEG-4 video, ilaa 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels @ 30 loox kasta labaad
Motion jpeg (M-jpeg) ilaa 35 Mbps, 1280 by 720 pixels @ 30 loox kasta labaad
Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in videos waxaa diinta iPad qaabka socon oo ka dibna ay la wareejiyo qalabka oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qaababka loo isticmaalo iyadoo looga baahan yahay ee iPad si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican iyo sidoo kale ugu fiican sawiro HD oo tayo leh oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo.
Transfer badaley videos in iPad
Marka videos ee loo beddelay in iPad qaabka socon dibna waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in iPad ku xiran tahay nidaamka iyo files waxaa lagu wareejiyay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxa kale oo ay heli doonaan user iyo HD videos iyo sawiro iyo haddii Wondershare ka dibna waxaa loo isticmaalay waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo in ugu fiican in la siiyo tayada dadka isticmaala ku joogay oo dhan oo aan khasaaraha tayada wax.
Barnaamijka waxaa uu soo bandhigay in qayb ka mid ah tutorial ka dhigi doonaa in la hubiyo in ay sawiro iyo videos waxaa loo wareejiyaa iPad ka fiidiyo oo aan dadaal badan oo taas user ay u baahan tahay in la hubiyo in barnaamijka software-ka loo isticmaalo ee hab fiican inaad heshid natiijada in ay yihiin cabsi badan. Dhibic ugu muhiim ah in arrintan la xiriira waa in la hubiyo in barnaamijka ayaa la dhisay si ay u gudbiyaan videos ka fiidiyo ah in iPad si toos ah laakiin muuqaalka guud ee barnaamijka waa sida in hubiyaa in adeegyada ugu fiican sidoo kale la siiyaa marka ay timaado kala iibsiga sawirka sida barnaamijkan sidoo kale u ogolaataa user ay u fudayd iyo qanacsanaanta wareejiyo sawirada. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in tallaabooyinka ay halkan ku xusan la raacay sida ay tahay in la hubiyo in arrinta la xalin iyo user helo natiijada ugu wanaagsan wax dib u dhac iyo arrin aan. Faahfaahinta barnaamijka ayaa la sheegay in ay ka buuxaan oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aad u hesho adeegyada waa kuwa ugu khayr iyo gobolka of farshaxanka arrintan la xiriira
Tababare File iPad: Maamul Files on Your iPad Well
> Resource > iPad > Talooyin iyo tabaha ee AVCHD on iPad